“Waan ooyi doonaa marka uu Lionel Messi ciyaaraha ka fariisto” - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 14, 2020 at 06:45 “Waan ooyi doonaa marka uu Lionel Messi ciyaaraha ka fariisto”2020-01-14T06:45:26+01:00 CAYAARAHA
(Barcelona) 14 Jan 2020. Waxaa jira shaqsiyaad badan ee si xoogan ula dhacsan kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi, kaddib mucjisadii uu ka sameeyay kubadda cagta xirfadiia ciyaareed.
Haddaba macalinka cusub ee kooxda Barcelona Quique Setien ayaa la soo qaatay wareysi uu horey u bixiyay xilligii uu macalinka ka ahaa Real Betis, wuxuuna carabka ku adkeeyay inuu ooyi doono kaddib marka uu Lionel Messi ciyaaraha ka fadhiisto.
Bishii Maarso 17-keedii sanadkii hore, kooxaha Barcelona iyo Real Betis ayaa ku wada ciyaaray garoonka Benito Villamarín, Blugarana ayaana kulankaas ku adkaatay 1-4.
Lionel Messi ayaa kulaankaas dhaliyay goolasha loo yaqaano saddexleey, wuxuuna xilligaas salaan salaam sharafeed ka helay taageerayaasha Real Betis, kuwaasoo la dhacay goolashii cajiibka ahaa uu ka dhaliyay inta ciyaarta ay socotay inkastoo ay guuldarreysteen.
Ciyaarta kaddib Quique Setien oo xilligaas macalin u ahaa kooxda Real Betis ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan jecleystay salaan sharafeedka ay u direen taageerayaasheena Lionel Messi, waa run inaan maanta ku hor dhibtoonay, laakiin Messi sida caadiga ah wuxuu inaga dhigaa inaan ku raaxeysano kubadda cagta”.
“Ma aanan arag ciyaaryahan sida Messi oo kale ah taariikhda, wuxuu sidaas sameynayaa muddo dhan 10 sano, ma aqaano haddii uu Pele la mid ahaa Messi”.
“Marka ciyaaryahan sida Xavi oo kale ciyaaraha ka fariisto, waxay la mid tahay sida inaad iska saarto kalidaada, laakiin maalinta uu Lionel Messi ciyaaraha ka fariisan doono weligey waan ooyi doonaa”.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday xalay inay shaqada ka cayrisay Tababare Ernesto Valverde, isla markaana waxa ay magacaabatay macallin cusub.
Barcelona waxa ay bedelka Tababare Ernesto Valverde u magacaabatay macallinkii hore ee kooxda Real Betis, Quique Setien.
« Al-shabaab oo sheegtay in ay dib ula wareegtay degaanka Toorratoorow
Khibraddiisa Tababarenimo, Kulankii Uu Messi La Qaatay Iyo Wax Kasta Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Tababaraha Cusub Ee Barcelona »